ဒူဒူကြီး: May 2012
သတ္တုဗေဒနှင့် Materials Science ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများ
သတ္တုဗေဒနှင့် Materials Science ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းတွေကို၊ ရနိုင်သလောက်၊ တင်ပေးပါ့မယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ "Abrasion Resistance of Materials", "Advanced Magnetic Materials" , "Pitting Corrosion" , "Recent Researches in Metallurgical Engineering - From Extraction to Forming" နဲ့ "Powder Metallurgy" ဆိုတဲ့၊ စာအုပ် (၆) အုပ်ကို၊ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
"Abrasion Resistance of Materials"
Abrasion Resistance of Polymer Nanocomposites - A Review, Abrasive Effects Observed in Concrete Hydraulic Surfaces of Dams and Application of Repair Materials, Abrasion Resistance of High Performance Fabrics, Numerical Simulation of Abrasion of Particles, Low Impact Velocity Wastage in FBCs - Experimental Results and Comparison Between Abrasion and Erosion Theories, Heat and Thermochemical Treatment of Structural and Tool Steels, Analysis of Abrasion Characteristics in Textiles, Rubber Abrasion Resistance, Effect of Abrasive Size on Wear နဲ့ Abrasion Resistance of Cement-Based Composites ဆိုတဲ့၊ Chapter (၁၀) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
"Advanced Magnetic Materials"
Rapidly Solidified Magnetic Nanowires and Submicron Wires, M-Type Barium Hexagonal Ferrite Films, Tailoring the Interface Properties of Magnetite for Spintronics, Biomedical Applications of Multiferroic Nanoparticles, Micro-Fabrication of Planar Inductors for High Frequency DC-DC Power Converters, Micro-Fabrication of Planar Inductors for High Frequency DC-DC Power Converters, Fe-Al Alloys' Magnetism, Magnetic Material Characterization Using an Inverse Problem Approach နဲ့ The Everett Integral and Its Analytical Approximationဆိုတဲ့၊ Chapter (၈) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Electrochemical Characterisation to Study the Pitting Corrosion Behaviour of Beryllium, Mechanism of Pit Growth in Homogeneous Aluminum Alloys, Pitting Corrosion Monitoring Using Acoustic Emission, Oscillatory Phenomena asaProbe to Study Pitting Corrosion of Iron in Halide-Containing Sulfuric Acid Solutions, Systemic and Local Tissue Response to Titanium Corrosion, Importance of Etch Film Formation During AC Controlled Pitting of Aluminium နဲ့ Corrosive Effects of Chlorides on Metals ဆိုတဲ့၊ Chapter (၇) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
"Recent Researches in Metallurgical Engineering - From Extraction to Forming"
Possibilities of Exploitation of Bauxite Residue from Alumina Production, Oxidative Hydrometallurgy of Sulphide Minerals, Methods for the Enhancement of Mass Transport at the Recovery of Metal Ions from Hydroelectrometallurgical Processes, Modelling of the Refining Processes in the Production of Ferrochrome and Stainless Steel, The Estimation of the Quenching Effects After Carburising Using an Empirical Way Based on Jominy Test Results, Semisolid Processing of Al/β-SiC Composites by Mechanical Stirring Casting and High Pressure Die Casting, Die Casting and New Rheocasting နဲ့ Squeeze Casting of Al-Si Alloys ဆိုတဲ့၊ Chapter (၈) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Selection of Best Formulation for Semi-Metallic Brake Friction Materials Development, Porous Metals and Metal Foams Made from Powders, Aluminium Alloy Foams: Production and Properties, The Fabrication of Porous Barium Titanate Ceramics via Pore-Forming Agents (PFAs) for Thermistor and Sensor Applications, နဲ့ Hybrid Gas Atomization for Powder Production ဆိုတဲ့၊ Chapter (၅) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Novel Electromagnetic Phenomena in Graphene and Subsequent Microwave Devices Enabled by Multi-Scale Metamaterials, Electrodynamical Analysis of Open Lossy Metamaterial Waveguide and Scattering Structures, The Group Velocity Picture of Metamaterial Systems, Formation of Coherent Multi-Element Resonance States in Metamaterials, Space Coordinate Transformation and Applications, Effective Medium Theories and Symmetry Properties of Elastic Metamaterials, Resonant Negative Refractive Index Metamaterials, Nonlinear Left-Handed Metamaterials, Non-Unity Permeability in InP-Based Photonic Device Combined with Metamaterial, Electromagnetic Response and Broadband Utilities of Planar Metamaterials, Design and Characterization of Metamaterials for Optical and Radio Communications, Characterization of Metamaterial Transmission Lines with Coupled Resonators Through Parameter Extraction, Synthesis of Planar EBG Structures Based on Genetic Programming, Magnonic Metamaterials, Investigation of Dipole Antenna Loaded with DPS and DNG Materials, Antenna Designs with Electromagnetic Band Gap Structures, Designs of True-Time-Delay Lines and Phase Shifters Based on CRLH TL Unit Cells, Perfect Metamaterial Absorbers in Microwave and Terahertz Bands, Metamaterial-Based Compact Filter Design, Metasurfaces for High Directivity Antenna Applications, Magnetically Tunable Unidirectional Electromagnetic Devices Based on Magnetic Surface Plasmon, Applications of Artificial Magnetic Conductors in Monopole and Dipole Antennas နဲ့ Compact Coplanar Waveguide Metamaterial-Inspired Lines and Its Use in Highly Selective and Tunable Bandpass Filters ဆိုတဲ့၊ Chapter (၂၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။ သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာတွေသာမက၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာတွေပါ၊ ကိုးကားကြတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှတဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 03:15 No comments:
Labels: သတ္တုဗေဒနှင့် Materials Science ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများ
သဘေ်ာတွေမှာ hybrid electric propulsion systems တွေကို တတ်ဆင် အသုံးပြုလာကြတော့မှာလား ?
ဒူဒူကြီး။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ သဘေ်ာတွေရဲ့ existing propulsion system နဲ့ အသစ် တည်ဆောက်မယ့် သဘေ်ာတွေရဲ့ propulsion system တွေမှာ၊ mechanical propulsion system အစား၊ hybrid electric propulsion systems တွေကို တတ်ဆင် အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ GE ဆိုတဲ့ General Electric မှ ထုတ်လုပ်တဲ့၊ hybrid systems တွေကို၊ စစ်ရေယာဉ်တွေနဲ့ ကုန်တင် သဘေ်ာတွေမှာ၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ LM series gas turbines တွေကို၊ electric motors တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး၊ hybrid electric propulsion systems တွေအဖြစ်တတ်ဆင်ကြပါတယ်။ hybrid electric propulsion systems တွေကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဆူညံမှုနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Fig. GE LM2500 module with power out put of 25 MW
Fig. hybrid twin shaft electric propulsion configuration with mechanical gas turbine boost
CODAG လို့ခေါါတဲ့ Combined diesel and gas သို့မဟုတ် COGOD လို့ခေါါတဲ့ Combined diesel or gas arrangements တွေအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်လို့၊ သိရပါတယ်။ hybrid systems တွေကို၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှ ရေကြောင်းလျှပ်စစ်ပညာရပ်ဆိုတဲ့ Marine Electrical Engineering ဘာသာရပ် ဟာလည်း၊ ပိုမိုအရေးပါလာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ကိုထွန်း။ ဟုတ်ပါတယ် ဒူဒူရေ။ Marine Electrical Engineering ဘာသာရပ်ကို၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးချလာတာကို၊ ပိုတွေ့လာရပါတယ်။ နေရာတကာ instrumentation နဲ့ automation နည်းပညာတွေ ကို၊ အသုံးပြုလာကြတဲ့အတွက်၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာတွေလည်း၊ instrumentation နဲ့ automation ဆိုင်ရာ knowledge တွေရှိဖို့ပိုလိုအပ်လာတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးရီး ဟိုတနေ့က ကြုံခဲ့တာလေးကို၊ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်လာသမို့၊ ပြောပါရစေ။
ဦးရီး သဘေ်ာတစီးမှာ CUMMINS K 19 D (M) auxiliary engine (၃) လုံးတတ်ထားပါတယ်။ No. (1) နဲ့ No. (3) auxiliary engine တွေကို၊ generator နဲ့ ဆက်ပြီး၊ clutch ခံကာ cargo pump နဲ့တွဲသုံး ထားပါတယ်။ cargo pump ဟာ၊ တနာရီမှာ (၅၅၀) ကုဗမီတာနှုံး flow rate capacity ရှိပါတယ်။ cargo pump နဲ့ တွဲသုံးတဲ့အခါ idle speed 800 rpm မှာ clutch ကို engage လုပ်ပါတယ်။ cargo pump နဲ့ အသုံးပြုစဉ်၊ engine rpm ကို (၈၀၀) မှ (၁၄၀၀) အတွင်းအသုံးပြုသလို၊ low rpm အခြေအနေမှာ၊ inter lock အနေနဲ့ generator ရဲ့ excitation voltage ကို၊ ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။ excitation voltage ဖြတ်တောက် ထားရတာကတော့၊ generator ဟာ low rpm ဖြင့် အချိန်အကြာကြီး လည်ပတ်နေရတဲ့အခါ၊ winding တွေပူလာပြီး လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်၊ ဖြစ်ပါတယ်။ No. (2) auxiliary ကိုတော့၊ rated rpm 1800 မောင်းနှင်ပြီး၊ generator ဖြင့်သာ၊ တွဲဖက်အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. actuator unit
သမာရိုးကျတွေ့နေကျ generator engine တွေမှာ၊ governor ကို steeper motor နဲ့သာ အတိုး၊ အလျှော့ပြုလုပ်ပြီး engine rpm ကို ချိန်ညှိပေမယ့်၊ ဒီ CUMMINS K 19 D (M) auxiliary engine တွေ မှာတော့၊ fuel pump မှာ electrically operated actuator ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ governor actuator control PCB မှတဆင့်၊ signal ပေးသွင်းကာ အတိုး၊ အလျှော့ပြုလုပ်ပြီး engine rpm ချိန်ညှိပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက No. (1) auxiliary engine ဟာ cargo pump နဲ့တွဲစဉ် clutch engage လုပ်တာနဲ့ 1100 rpm သို့ထိုးတက်သွားပြီး၊ 1400 rpm အထိ increase အနေနဲ့ rpm ကိုမြှင့်လို့ရပါတယ်။ 1100 rpm အောက် ကိုတော့ decrease အနေနဲ့ လျှော့ချယူလို့ မရတာကို၊ သိရပါတယ်။ generator နဲ့ တွဲပြီး rated 1800 rpm ဖြင့်မောင်းစဉ်၊ (၂) မိနစ်ခန့်အကြာမှာ engine ထိုးရပ်သွားတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
Fig. Fuel pump
CUMMINS engine တွေရဲ့ ထူးခြားချက်တခုကတော့၊ PT type fuel pump ကိုယ်ထည်မှာ solenoid valve တလုံးထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပြီး၊ DC 24 volt supply ပေးကာ၊ fuel inlet ကို ဖွင့်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ engine စတင်နှိုးတာနဲ့ DC 24 volt supply ရောက်ရှိကာ၊ valve ပွင့်သွားပြီး၊ fuel ဟာ fuel pump မှတဆင့်၊ fuel injectors များသို့ပေးပို့ပါတယ်။ engine ရပ်တဲ့အခါနဲ့ LO low pressure, over-speed နဲ့ jacket cooling high temperature အစရှိတဲ့ safety system ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အခြေအနေတွေမှာလည်း၊ DC 24 volt supply ကို ဖြတ်တောက်ပြီး၊ engine အလိုအလျှောက် ရပ်စေပါတယ်။
အကယ်၍ safety system ကို by-pass လုပ်လိုလျှင်၊ fuel pump ကိုယ်ထည်မှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ manual knob ကလေးကို၊ ဖိချကာ valve ကို ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ engine rpm အတိုးအလျှော့ကိုတော့ fuel pump ကိုယ်ထည်မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ actuator မှ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ actuator ရဲ့ coil အတွင်းသို့၊ governor actuator PCB မှ signal ပေးသွင်းရာမှာ၊ current ပမာဏအနည်း၊ အများပေါါ မူတည်ပြီး actuator ရဲ့ plunger ဟာ အတိုးအလျှော့ဖြင့် ရွှေ့လျှားပါတယ်။
တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးကို ဆက်ပါဦးမယ်။ ပထမဆုံး governor actuator PCB မှ၊ potentio meter လေးကို၊ adjust လုပ်ပြီးချိန်ညှိတဲ့အခါ၊ cargo pump clutch engage အခြေအနေမှာ engine rpm ကို 950 rpm အထိ၊ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ တင်ဆောင်ထားတဲ့ cargo ဟာ viscosity 550 cSt ခန့်ရှိပြီး၊ စေးပြစ် လွန်းတဲ့ ရေနံဓါတု petrol-chemical product ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ pump rpm နိမ့်နိမ့်မောင်းနှင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် tank တခုနဲ့တခု cargo အပြောင်းအလဲ tank to tank transfer မှာ rpm ကိုလိုသလို၊ မလျှော့နိုင်တဲ့ အတွက်၊ tank over flow ဖြစ်ကာ၊ ဆီလျှံခြင်းမှတဆင့် pollution ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ PCB card ရဲ့ အပြစ်လို့ယူဆပြီး၊ PCB card ကိုအသစ်လဲလှယ်ကာ ပြန်လည်ချိန်ညှိတဲ့အခါမှာ engine rpm ကို၊ လိုအပ်သလို ချိန်ညှိနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးရီးတို့တတွေ Marine Electrical Engineering ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ၊ ဖြစ်ပေါါတိုးတက်မှုတွေကို မျက်ခြေမပြတ်ဖို့၊ လိုနေပြီလို့ ယူဆမိပါတယ် ဒူဒူရေ။
Reference and Image credit to : http://articles.maritimepropulsion.com/, http://www.p-wholesale.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 19:02 No comments:
သဘေ်ာအင်ဂျင်တွေမှာ LNG ဓါတ်ငွေ့ကို၊ အစားထိုးလောင်စာအဖြစ်၊ အသုံးပြုတော့မည်။
DWT လို့ခေါါတဲ့ dead weight (၂၅၀၀၀) တန်ချိန်ရှိတဲ့၊ 'Bit Viking' ဟာ LNG ဓါတ်ငွေ့ကို၊ အစားထိုးလောင်စာအဖြစ်၊ ပထမဆုံး အသုံးပြုမယ့် product tanker သဘေ်ာဖြစ်ပါတယ်။ mechanical propulsion system မှာ၊ primary fuel အဖြစ် LNG ကို၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။ 'Bit Viking' ဟာ၊ twin screw propulsion တတ်ဆင်ထားတဲ့သဘေ်ာဖြစ်ပြီး၊ heavy fuel oil (HFO) ကို လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့၊ Wärtsilä 6L46 engine (၂) လုံးပါဝင်ပါတယ်။ 'Bit Viking' ကို၊ တရုပ်ပြည် Shanghai မှ Edwards Shipbuilding ဆိုတဲ့ သဘေ်ာကျင်းမှာ၊ (၂၀၀၇) ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
Fig. M.T Bit Viking
သဘေ်ာအင်ဂျင်တွေကြောင့် ပေါါပေါက်လာမယ့်၊ air pollution လျှော့ချဖို့ 'Emission standards' တွေကို၊ regulations အဖြစ် ပြဌာန်းထားပါတယ်။ nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides, particulate matter (PM) လို့ခေါါတဲ့ soot နဲ့ carbon monoxide (CO) သို့မဟုတ် volatile hydrocarbons တွေကြောင့် air pollution ဖြစ်ပေါါရပါတယ်။ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဆိုတဲ့ greenhouse effect ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ nitrous oxide (N2O) နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုတဲ့ air pollution ကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ 'NOx' တို့ကို၊ ရောထွေး မှတ်သားတတ် ပါတယ်။
NOx ထွက်ပေါါလာမယ့် primary sources တွေကို thermal NOx, fuel NOx နဲ့ prompt NOx ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ thermal NOx ဟာ၊ high temperature oxidation ကြောင့် ဖြစ်ပေါါပြီး၊ fuel NOx ကတော့ combustion ကြောင့်ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ fuel NOx ဟာ NOx ထွက်ပေါါမယ့် အဓိက major source ဖြစ်ပါတယ်။ Prompt Nox ကတော့ combustion ရဲ့ earliest stage မှာ ဖြစ်ပေါါပါတယ်။
HFO ကိုအသုံးမပြုမှီ main engine ရဲ့ primary fuel အဖြစ်၊ MDO လို့ခေါါတဲ့ marine diesel oil နဲ့ MGO လို့ခေါါတဲ့ marine gas oil တို့ကို၊ အသုံးပြုခဲ့ရာမှ LNG ဓါတ်ငွေ့နဲ့ ပြောင်းလဲ၊ အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ LNG ဓါတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုဖို့၊ မူလတတ်ဆင်ထားတဲ့ Wärtsilä 6L46 အင်ဂျင်တွေမှာ cylinder bore မူလ 46 mm အရွယ်အစား အစား၊ 50 mm အထိ honing out ဆိုတဲ့ ခြစ်ထုတ်စားခြင်း၊ cylinder heads တွေ အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း၊ cylinder liners နဲ့ anti-polishing rings တွေ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊ connecting rods အပေါါ အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊ dual-needle injection valves တွေတတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ DF ဆိုတဲ့ dual-fuel engines ဖြင့်ကိုက်ညီမယ့်၊ turbochargers တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ camshaft components တွေကို DF miller-valve timing အဖြစ်အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနဲ့ UNIC ဆိုတဲ့ 'unified controls' engine control system ကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ အစရှိတာတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်။
MARPOL regulation Annex VI : Prevention of air pollution by ships အရ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ 'Emission Control Areas' တွေမှာ၊ primary fuel အဖြစ် LNG ကို၊ အစားထိုး အသုံးပြုတဲ့အတွက် "NOx" လို့ခေါါတဲ့၊ noxious exhaust gas emissions ထုတ်လွှင့်မှုကို၊ မူလထက် (၇၅) % အထိလျှော့ချနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ (၅၀၀) ကုဗမီတာရှိတဲ့ LNG tank (၂) လုံးကို၊ main deck မှာ တတ်ဆင်ထားပြီး၊ bunker tank အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။
Reference : http://articles.maritimepropulsion.com/, မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် (၄)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် စာစောင်အတွက် မန်ဘာတို့ရဲ့စကားသံများ။
Posted by ဒူဒူကြီး at 05:49 No comments:
စက်ာပူ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ်ပြတ်တောက်မှု (၃)
စက်ာပူ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ်ပြတ်တောက်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ စုံစမ်းရေးကော်မတီမှ စတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Committee of Inquiry (COI) ဆိုတဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မတီမှာ ခရိုင်တရားသူကြီး Tan Siong Thye မှ၊ ဥက္ကဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ နန်ယန် နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ စက်မှုနှင့် လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာပါမောက္ခ Lim Mong King နဲ့ အကျဉ်းဌာန ညွန်ကြားရေးမှုး Soh Wai Wah တို့မှ၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Land Transport Authority (LTA) ဆိုတဲ့ regulator အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့၊ ဥပဒေအကျိုးဆောင် အဖြစ် Allen & Gledhill ဥပဒေအဖွဲ့မှ၊ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပြီး၊ Singapore Mass Rapid Transit (SMRT) ဆိုတဲ့ operator ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းဖက်ရဲ့၊ ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖြစ် Drew & Napier ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး၊ ဥပဒေအဖွဲ့မှ၊ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါတယ်။
Committee of Inquiry : Who's who
Attorney General (AG) ရှေ့နေချုပ်ရုံး ဒုတိယရှေ့နေချုပ် Second Solicitor General Lionel Lee မှ၊ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ စက်ာပူ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ် ဓါတ်အားစနစ်ပြတ်တောက်မှုနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ သက်သေစုစုပေါင်း (၁၀၈) ဦးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေ ကိုလည်း၊ စုံစမ်းရေးကော်မတီမှ စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေ (၁၀၈) ဦးမှာ ဘူတာရုံပိုင် (၃၈) ဦး၊ ခရီးသည် (၃) ဦးအပါအဝင်၊ SMRT ရထားတွေရဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေသူ အင်ဂျင်နီယာများနဲ့၊ railway engineering နဲ့ vibration engineering ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ၊ expert witness (၁၁) ဦးရဲ့ စုံစမ်းတွ့ရှိချက်တွေကိုပါ၊ ထည့်သွင်းစစ်ဆေးသွားမှာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ်ပြတ်တောက်မှုရဲ့ အကြောင်းရင်းရှာဖွေဖို့နဲ့ နောက်ထပ် မဖြစ်ပေါါစေရန် တားဆီးနိုင်ဖို့ကို၊ အဓိကထား စုံစမ်းရန် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်မှ၊ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် floating slabs တွေနဲ့ အသစ်ရောက်လာတဲ့ တရုပ်ပြည်ထုတ် ရထားတွဲတွေကြောင့်၊ claws တွေနေရာရွှေ့သွားခြင်း မဟုတ် ကြောင်းကို၊ ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ သိရတယ်လို့၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်မှ၊ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ Criminal Investigation Department (CID) မှ Assistant Superintendent of Police လို့ခေါါတဲ့ ရဲဝန်ထောက် Roy Lim ကလည်း၊ အချိန် (၁၃) ပတ်ခန့်ယူကာ၊ အထောက်အထား evidence တွေ စုဆောင်းရယူခဲ့ကြောင်းနဲ့၊ တမင်သက်သက် လုပ်ကြံဖျက်စီးမှု sabotage မဟုတ်ကြောင်း၊ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ၊ ရထားမောင်းသူ (၂) ဦးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေအရ၊ ရထားလမ်း တလျှောက်၊ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ရထားမှတ် (၁၃၃) မောင်းနှင်သူဟာ ၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ 'Dhoby Ghuat' ဘူတာမဝင်ခင်၊ ရထားတွဲအောက်မှ၊ မီးပွား spark တွေထွက်လာတာ၊ တွေ့ရတယ်လို့၊ ပဏာမ စစ်ဆေးချက်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
'Dhoby Ghuat' ဘူတာမှထွက်ပြီး၊ မီတာ (၂၀၀) ခန့်မောင်းနှင်သွားစဉ်၊ မီးပွားတွေ ထွက်ရုံမက၊ ညှော်နံ့လည်းရကာ၊ တခုခုပေါက်ကွဲသလို အသံကိုပါကြားရတယ်လို့၊ သိရပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ ရထားမောင်းနှင်ခန်းမှာ fault အချက်ပြမီးလင်းလာပြီး၊ 'Braddell' ဘူတာအရောက်မှာတော့ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်သွားကြောင်း၊ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရထားမှတ် (၁၃၅) မောင်းနှင်သူကတော့ ၊ဒီဇင်ဘာလ (၁ရ) ရက်နေ့မှာ 'City Hall' ဘူတာ အထွက်မှာ၊ တခုခုပေါက်ကွဲသလို အသံကြားရပြီး၊ ညှော်နံ့လည်း ရတယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရဲဝန်ထောက် Roy Lim ဟာ ဒီဇင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့ညမှာ ရထားလမ်းတလျှောက်စစ်ဆေးစဉ် third rail ရဲ့ နေရာတချို့မှာ အက်ကွဲမှုတွေ၊ တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပထမနေ့မှာ စုံစမ်းရေးကော်မတီသို့ SMRT နဲ့ LTA တို့ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်များမှ၊ တင်သွင်းခဲ့တဲ့လျှောက်လှဲချက်တွေဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း ပါတယ်။ အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ aging infrastructure ရထားလမ်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ material defects တွေကြောင့်၊ စက်ာပူ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါါခဲ့ရတယ်လို့၊ SMRT ဥပဒေ အကျိုးဆောင် Cavinder Bull မှ၊ စတင်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ North - South နဲ့ East - West MRT ရထားလမ်းပိုင်းတွေကို၊ (၁၉၈၀) ခုနှစ်မှာ MRTC လို့ခေါါတဲ့၊ Mass Rapid Transit Corporation မှတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၈ရ) ခုနှစ်မှာ SMRT ဟာ၊ operator အဖြစ်၊ ရထားတွေ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်မှာတော့ LTA ဟာ၊ ရထားလမ်းဆိုင်ရာ infrastructure အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို၊ MRTC ထံမှ၊ လွဲပြောင်းယူခဲ့ ပါတယ်။
North - South လမ်းအပိုင်း၊ Novena ဘူတာမှ City Hall ဘူတာအထိ၊ ရထားလမ်းပိုင်းကို phase I အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။ phase I မှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ claws အများစုဟာ၊ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ first generation claws တွေဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ်အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်တဲ့ new generation claws တွေနဲ့၊ အစားထိုးလဲလှယ်သင့်တယ်လို့ (၁၉၈၇) ခုနှစ်မှာ၊ Bricknell Willis ဆိုတဲ့၊ ဗြိတိသျှကုမ္မဏီမှ၊ MRTC ကို အကြံပေးခဲ့ကြောင်း၊ SMRT ရဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်မှ၊ စုံစမ်းရေးကော်မတီသို့လျှောက်လဲခဲ့ ပါတယ်။
Bricknell Willis ဆိုတဲ့၊ ဗြိတိသျှကုမ္မဏီဟာ၊ ရထားလမ်းပိုင်း phase I မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ third rail system ထုတ်လုပ်သူ manufacturer ဖြစ်တဲ့ အပြင်၊ third rail system ရဲ့ design ကိုပါရေးဆွဲခဲ့တဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲတတ်ဆင်ဖို့ အကြံပေးခဲ့တဲ့ claws တွေဟာ split pin type claws တွေဖြစ်ပြီး၊ vibration ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့၊ ဆိုပါတယ်။ split pin type claws တွေကို၊ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ third rail system တွေမှာ၊ ဒီနေ့အထိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါါခြင်းမရှိခဲ့တာကိုလည်း၊ SMRT ရဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်မှ၊ ထည့်သွင်းလျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။
claws တွေပြောင်းလဲတတ်ဆင်ရန်၊ အကြံပေးချက်ကို MRTC မှ၊ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်မှာတော့ claw အချို့ပြုတ်ထွက်နေတာကို၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး၊ SMRT မှ Bricknell Willis ကုမ္မဏီရဲ့ အကြံပေးချက်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ high speed ramp area လို့ခေါါတဲ့ အရှိန်မြှင့်ကာမောင်းနှင်မယ့် ရထားလမ်းပိုင်းတွေမှာ၊ ယာယီအဖြစ် plastic cable ties တွေအသုံးပြုကာ၊ claws တွေကို ချည်နှောင်ထားဖို့၊ Bricknell Willis ကုမ္မဏီမှ ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ SMRT ဟာ LTA ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ၊ stainless steel housings တွေ တတ်ဆင်ကာ၊ claws တွေနေရာ မရွှေ့စေဖို့၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ သိရပါတယ်။ SMRT အနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါါ last generation claws တွေကို၊ အစားထိုးတတ်ဆင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကိုလည်း၊
SMRT ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်မှ၊ ထည့်သွင်းလျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ phase I မှာ လက်ရှိ တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ claws တွေဟာ cast iron claws တွေဖြစ်ပြီး၊ last generation claws တွေဖြစ်တဲ့ fifth - generation claws တွေကတော့ cast stainless steel claws တွေဖြစ်ပြီး၊ claw နဲ့ fastener ကို၊ bolts & nuts တွေသုံးကာ၊ တတ်ဆင်ရပါတယ်။
railway engineering နဲ့ vibration engineering ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ၊ expert witness တွေရဲ့၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကို၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့ တိုက်ရိုက် တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ မှာဖြစ်ပေါါခဲ့တဲ့ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်မှုဟာ၊ claws assembly မှ၊ fastener တွေကျိုးပဲ့ပြီး၊ insulator နေရာရွေ့သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်း၊ fastener တွေကျိုးပဲ့ရခြင်းဟာ manufacturing faults ဆိုတဲ့၊ စတင် ထုတ်လုပ်စဉ် ကတည်းက design ဆိုင်ရာနဲ့ material composition ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ expert witness တွေရဲ့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေမှာ၊ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ မှာဖြစ်ပေါါခဲ့တဲ့ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်မှုကတော့ third rail အက်ကွဲမှုတွေကြောင့်၊ ဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်း၊ ကာလကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အတွက် third rail ဟာ၊ ခိုင်ခန့်မှုအားနည်းပါးခဲ့ရပြီး၊ အက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါါရကြောင်း၊ ၊ expert witness တွေရဲ့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကို၊ ကိုးကားကာ SMRT ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်မှ၊ လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။
SMRT ဟာ၊ ရထားနဲ့ပက်သက်သမျှ၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဆိင်ရာ procurement ကိစ္စရပ်တိုင်းကို၊ LTA သို့တင်ပြပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပိုပစ္စည်း spare parts နဲ့ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး maintenance ဆိုင်ရာကိစ္စတွေ နဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးအပိုင်းမှာ ကန့်သတ်ခြင်း မရှိပဲ သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေးတွေဆောင်ရွက်ရာမှာ မူလထုတ်လုပ်သူ manufacturers များမှ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွှန်း standards တွေထက်ပိုပြီး၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုးလာတဲ့ ပြေးဆွဲမှု အခေါက်ရည်အကြိမ် အရည်အတွက်၊ တိုးလာတဲ့ခရီးသည် အရည်အတွက်အရ၊ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေးတွေကိုလည်း၊ တိုးမြှင့်ကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ SMRT ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်မှ၊ လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။
SMRT ဟာပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေးတွေဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ improvement အနေနဲ့ တိုးတက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း မရှိတဲ့အတွက်၊ စက်ာပူ North - South MRT လမ်းအပိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါါခဲ့ရတယ်လို့၊ LTA ရဲ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင် Andrew Yeo မှ၊ စတင်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သံလမ်းနဲ့ထိတွေ့မယ့် ရထားဘီးတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ၊ ညီညာမှု မရှိတဲ့အတွက်၊ vibrations တွေ ဖြစ်ပေါါခဲ့ရတယ်လို့၊ ဆိုပါတယ်။ Vipac Engineering ဆိုတဲ့၊ သြစတေးလျှအခြေစိုက်၊ ဓါတ်ခွဲခန်း စမ်းသတ်မှုကုမ္မဏီရဲ့ သရုပ်ပြစမ်းသတ်မှု simulation test အရ၊ ဝိုင်းစက်ညီညာခြင်းမရှိပဲ၊ အချိုင့်တွေ ရှိနေတဲ့ ရထားဘီး မျက်နှာပြင်ကြောင့် excessive vibration တွေဖြစ်ပေါါရကြောင်း၊ ကိုးကားလျှောက်လဲသွားပါတယ်။
Reference & Image credit to : The New Paper, April 17 & 18, 2012., The Strait Times, April 17 & 18, 2012.,
Posted by ကိုထွန်း at 22:24 No comments:
သဘေ်ာတွေမှာ hybrid electric propulsion systems တွေ...
သဘေ်ာအင်ဂျင်တွေမှာ LNG ဓါတ်ငွေ့ကို၊ အစားထိုးလောင်စ...